Golaha Wasiiradda oo kulan amaanka iyo digniintii Britan looga hadlayo ku yeeshay Muqdisho – Radio Daljir
Abriil 8, 2013 10:08 b 0
Isniin, 08, April, 2013?Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii aan caadiga ahayn iyadoo uu shir guddoominayay ku simaha Ra?iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Cadaaladda ?iyo Arrimaha Diinta Mudane Cabdullahi Abyen Nuur.
Golaha ayaa maanta ka dooday arimaha amniga, miisaaniyadii yarayd ee (Oct.,Nov. and Dec.) ee sanadkii la soo dhaafay iyo digniintii dawladda ingiriiska ee ku aadanayd muwaadiniintooda.
Markii uu soo dhamaaday shirka gollaha ayaa waxaa saxaafada la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Cabdishakuur Cali Mire.
?Goluhu waxay isla soo qaadeen sidii ciidamadda qalabka sida ay xoojin lahayeen amniga oo hada aad moodo inuu heer fiican maraayo, dawladunna ?digniinta ay soo saartay dawaladda Ingiriiska oo ku wajahnayd muwaadiniintooda inaysan u safrin Soomaaliya ay tahay ?mid ay xaq u leeyihiin ?inay ka fakaraan muwaadiniintooda, balse aysan jirin khatar weyn oo keeni karta in aan loo safrin caasimada, mana jirto wax isbadal ah ka jira dhanka nabad galayada? ayuu yiri
wasiirku oo xusay in mar walba hay?adaha amnigu u taagan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen amniga caasimada.
Sidoo kale Wasiirka Maaliyadda iyo Qorshaynta Mudane Maxamuud Xassan Suleiman ayaa warbixin ka horjeediyey golaha oo ka hadlaysa miisaniyadii sadexda bilood ahayd ee la isticmaalay dhamaadka sanadkii hore ee 2012, oo sida deg dega loogu baahnaa madaama aan la samayn miisaaniyad sanadeedka, waxayna wasaaradu soo celisay warbixin ku saabsan dakhligii soo galay wasaarada iyo sidii loo isticmaalay miisaaniyadaas dood dheer ka dibna Goluhuna wuxuu ansixiyey soo jeedinta Wasaaradda, taasina waxay muujinaysa sida Wasaarada maaliyaddu ay ugu go?an tahay isla xisaabtanka, mana dhicin jirin dowladihii hore in warbixino noocaan ah la ?horkeeno golaha wasiiradda.
Ugu danbayntii goluhu wuxuu si wada jir ah tacsi ugu diray qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday Marxuum Xassan Maxamed Nuur Shaati Guduud oo shalay lagu aasay magaalda Baydhabo, wuxuuna Goluhu isku raacay in wixii maanta ka bilowda garoonka diyaaradaha baydhabo loo bixiyey Garoonka Caalamiga ah ee Shaati Gaduud.